Nashqadayaasha Isbaanishka ee taariikhda leh | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | | Fanaaniin
Naqshadayaasha sawirada ayaa door muhiim ah ka ciyaara gudbinta iyo iibinta fikradaha. Naqshadaynta waa inaad haysataa edbinta, hal-abuurka iyo mar kasta ka digtoonow isbeddellada cusub oo naftaada dib u soo kici. Hawsha ugu weyn ee naqshadeeyaha garaafyada waa wax kasta oo fariinta muuqaalku ka kooban tahay, waa inay ogaadaan sida loo gudbiyo fikradda hab hal abuur leh.
Kaliya naqshadeeyayaasha garaafyada ugu fiican ayaa ka dhigaya shaqadooda inay ka soo muuqdaan farshaxanada inteeda kale. Waa xirfadlayaal leh qaab shakhsi ah, gaar ah oo si sahlan loo aqoonsan karo, waa saddex qiyam oo kala duwan; tababar, hal-abuur iyo adkaysi. Maqaalkan, waxaan uga hadli doonaa waxa ugu fiican naqshadeeyayaasha garaafyada ee Spain kuwaas oo isku darsada saddexdan dhinac, iyo kuwo kale.
Naqshadeeye kaliya maaha in uu ka shaqaynayo istuudiyo shaqadiisuna waxay ka muuqdaan faylalka, maya. Naqshadeeye garaafku wuxuu joogi karaa waaxyo kala duwan sida telefishinka, shineemada, majaladaha, warbaahinta dhijitaalka ah, iwm. Waxaa jira meelo badan oo isgaarsiineed oo uu naqshadeeyuhu ka shaqeyn karo. Waxa ugu muhiimsan waa in nashqadeeyaha uu fahmo qaabkiisa, dhageystayaasha bartilmaameedka ah ee uu la hadlayo iyo fariinta uu ku gudbinayo shaqadiisa.
1 Naqshad garaafeed ma muhiim baa?
2 Nashqadeeyayaasha garaafyada Isbaanishka ee ugu fiican
2.3 Isteeer Cross
Naqshad garaafeed ma muhiim baa?
Nakhshad sawireedku waxa ay noqotay qalab isgaadhsiineed oo lagu gudbiyo fariinta shay, adeeg ama calaamad gaar ah. Naqshadayntu waxay ku jirtaa qaybo kala duwan oo sumad ah, laga bilaabo aqoonsiga shirkadda, naqshadeynta astaanta, naqshadeynta xayeysiiska, buug-yaraha ama buug-gacmeedyada shirkadaha, ololayaasha xayaysiinta, baakadaha, iyo kuwo kale.
Naqshadeeye garaafku waa inuu ahaadaa dib-u-cusbooneysi joogto ah, maadaama isbeddellada ay waqti ka dambeeyaan, marka lagu daro horumar halabuureed oo joogto ah. Nashqadeeyaha waa inuu arko waxyaabo kale oo naqshadeeyayaasha aysan arkin, waa in aad ka faa'iidaysato kartidaada oo aad ka baxdo caadadaada. Isbaanishka, waxaan leenahay qaab garaafyo ka duwan kan wadamada kale waana sababta naqshadeeyuhu uu had iyo jeer ula socdo waxa dhacaya.
Jaantuska naqshadeeye garaafyada ayaa muhiimad weyn u leh calaamadaha, maadaama ay mas'uul ka yihiin la shaqeynta sawirkooda, shaqadani waa inay noqotaa mid joogto ah oo daacad ah. Nashqadeeyaha waa inuu yimaado si uu u joogo oo uga tago calaamad meel kasta oo uu tago.
Nashqadeeyayaasha garaafyada Isbaanishka ee ugu fiican
Qof kastaa ma ogsoon yahay muhiimadda naqshadeynta garaafyadaMa fahmaan doorka naqshadeeyaha. Ma fahmayaan in marka ay arkaan calaamad, buug yar oo dukaamada waaweyn, boodhadhka ama bogga internetka, waxaas oo dhan ay soo mareen gacmaha naqshadeeyaha, waa shaqo waqti badan iyo dadaal badan qaadanaysa.
Nashqadaha garaafyada Isbaanishka ugu fiican in aan ka hadli doono, in aan xilka haynay ama aan sii wadi doono wanaajiso muuqaalka shirkadaha caanka ah ee dalkeena iyo dibaddaba. Waa magacyo ay tahay in qof walba, labadaba xirfadlayaasha farshaxanka garaafyada iyo kuwa dibadda ah, ay ogaadaan. Aragtida iyo falanqaynta shaqadiisa waa jimicsi lagu ogaanayo saameyntiisa, qaabkiisa iyo dhiirigelintiisa.
Sawir-qaade iyo naqshadeeye garaaf, oo ku dhashay Madrid 1963. Ka hor inta uusan soo galin adduunka farshaxanka garaafyada, wuxuu ka shaqeeyay jilaa shirkado masraxyo kala duwan. 1988, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo wargeyska Aragonese, Heraldo de Aragón. Waxa uu bartay nashqadeeyaha garaafiga ee Peret, kaas oo muhiim u ahaa xirfaddiisa xagga naqshadaynta adduunka, dhammaadka sannadahaas, waxa uu furay istuudiye u gaar ah, Camaleón, oo ku yaal Zaragoza.
Intii uu ku jiray xirfadiisa shaqo, Isidro Ferrer, waxa uu helay abaal-marinno badan oo naqshadayntiisa ah, tusaale ahaan, Biennale Of Young Mediterranean Artist Graphic Image Award ee 1995 ee Croatia, Abaalmarinta Naqshadeynta Qaranka ee 2002, iyo abaalmarino kale.
Isidro Ferrer, shaqadiisa, wuxuu ilaaliyaa qaab gaar ah oo qurux badan, isagoo qaar badan oo iyaga ka mid ah ku ciyaaraya daacadnimo iyo midowga motifyada naxdinta leh., wakhtiga la sawiro u gudbi fariin si xoog leh.
Waxa uu ku dhashay Madrid 1951, waa naqshadeeye leh qaab aad u gaar ah, taas oo u horseeday inuu helo calaamado aad u muhiim ah sida Loewe, Absolut Vodka, Benneton, Camper, iwm. doonaya in ay la shaqeeyaan isaga. Laakin Lamuu shaqayn oo kaliya magacyo balse waxa uu la shaqeeyay agaasimayaal iyo fannaaniin caan ah sida Andrés Calamaro, Pedro Almodóvar, Alex de la Iglesia, Bruce Springsteen, iyo kuwo kale.
Naqshadeeye, sawir-qaade, farshaxan-yaqaan iyo khabiir ku takhasusay qoraal-qore, waa xidhiidhiye aan xad lahayn. Shaqadiisa, Óscar Mariné, wuxuu ku xalliyaa mashaakilaadka xalalka hal-abuurka leh ee aqoonta qoraalka, muuqaal la cusboonaysiiyay iyo sawirkiisa. Shaqooyinkiisu waxay isku daraan xalal iyo hal-abuur.
Shaqooyinkiisa ayaa loo aqoonsan yahay jebi xadka naqshadeynta garaafyada, samaynta isku-dhafka farsamooyinka si aad ula qabsato fikradahaaga.
José María Cruz Novillo, shaki kuma jiro mid ka mid ah tixraacyada aan laga doodi karin ee adduunka naqshadeynta garaafyada heer qaran iyo heer caalami. Waxa uu ku dhashay Cuenca 1936. Waxa uu ka tagay waxbarashadiisa sharciga si uu u bilaabo shaqada sawir-gacmeedka Clarín Advertising ee Madrid. Mid ka mid ah waayo-aragnimada bedelay aragtidiisa iyo noloshiisa ayaa iska kaashaday sidii naqshadeeye warshadeed ee SEDI, iyo ka mid noqoshada kooxda fanaaniinta ee Pavilion Isbaanishka ee Bandhigga New York.
1969kii, wuxuu furay istuudiye u gaar ah halkaas Aqoonsiga shirkadeed ee caanka ah sida Correos, Pastor Banco, Urbis, Tesoro Público, Comunidad de Madrid, PSOE, COPE, El Mundo, El economista, Antena 3, Endesa, iyo qaar kaloo badan. Waxa dheer boodhadhka filimada astaanta u ah shaleemada Isbaanishka.
Habka shaqada ee Cruz Novillo ayaa sifo u ah isticmaalka qaababka joomatari, nashqadaha fudud, iyo dhismooyinka caadiga ah ee sinnaanta. Waxay ka dhigtaa isticmaalka istaroog fudud oo qaro weyn.
Waxa uu ku dhashay Madrid 1975. waa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha ugu caansan ee naqshadeynta garaafka Isbaanishka. Clara Montagut waxay isku qeexdaa inay tahay naqshadeeye garaaf, agaasime farshaxan iyo farsamayaqaan.
Muddo afar sano ah, waxay ahayd agaasimaha farshaxanka mid ka mid ah wargeysyada ugu muhiimsan ee ragga, Esquire magazine. Intaa waxaa dheer, oo hore ugu shaqaynayey majaladaha Prisa iyo Rolling Stone muddo 7 sano ah.
Waxaa lagu abaalmariyay hamigeeda naqshadeynta, iyadoo la siiyay abaalmarinta Graffica iyo NH oo ka timid Society for New Design.
Yaa aan garanayn mascot-kii Olombikada Barcelona 1992, Cobi, oo uu naqshadeeyay Javier Mariscal. naqshadeeye yaa la qabsada oo horumarisa qaabkeeda, dhammaan noocyada dusha sare iyo culuumta. Wuxuu tababarkiisa ka bilaabay Dugsiga Elisava ee Barcelona, ​​laakiin wakhti kuma lumin inuu bilaabo inuu raaco jidkiisa, isagoo raacaya dareenkiisa hal-abuurka ah.
Waad ku mahadsan tahay naqshadihiisa sida naqshadeeyaha gudaha iyo walxaha, wuxuu bilaabay aqoonsigiisa heer qaran iyo heer caalami. Naqshadeeye ku guuleystey abaal-marin 1999kii, oo wata Abaalmarinta Naqshadeynta Qaranka iyo 2011, oo leh Abaalmarinta Goya ee filimka firfircoonida ugu wanaagsan.
Taageere sawir-qaadista tan iyo markii uu yaraa, Manuel wuxuu bilaabay inuu barto dhismaha, laakiin ugu dhakhsaha badan wuu ka tagay daraasaddan si uu naftiisa ugu huro adduunka naqshadeynta.
Su Xirfadiisa adduunka ee farshaxanka garaafyada waxay ka bilaabataa wadajirka garaafyada Sidecar, halkaas oo uu uga soo shaqeeyay wakaaladaha sida Ogilvy, McCann iyo JWT.
Manuel Estrada wuxuu furay istuudiye u gaar ah halkaas oo uu naftiisa ugu huray naqshadeynta calaamadaha, daboolka buugaagta, boodhadhka, iwm, waana tan tan. Tobankii sano ee 90-kii, halkaas oo shaqadiisu ay gaartay heerkii ugu sarreeyay oo ay noqoto tixraac qaran.
Farshaxan Catalan, kaas oo u qaaday Maraykanka iyo Nederland. Marta Cerda waa a fanaanka oo u kala socdaalaya sawir-qaadis iyo sawir-qaadis. Daacadnimada uu dareemayo qoraal-ku-qorista waxay ka timi fasallada farshaxan-yaqaanka ee uu qaatay intii uu wax-barashadiisa ku jiray.
Waad ku mahadsan tahay saamaynta ay ku soo qaadatay khibradeeda xirfadeed, iyo xiisihii ay hore u lahayd ee loo yaqaan calligraphy, Marta waxay bilawday inay ka qayb qaadato oo ay horumariso nafteeda mashruuc kasta oo ay gacanta ku hayso, qaab aan la dhayalsan karin, iyo dhadhan qoraal-qoraal iyo tusaaleyn ka dhex muuqda mid kasta oo hawlihiisa ka mid ah. Marta Cerdá waxay la shaqeysay noocyo la aqoonsan yahay sida Ray Ban, Nike, Coca Cola, The Guardian, Panasonic, iyo qaar kaloo badan.
Liiska naqshadeeyayaasha Isbaanishka ayaa sii wadi doona inay ku daraan magacyo badan oo badan, boostadan waxaan ku taxnay 7-da ugu muhiimsan, laakiin hubaal waxaan ka maqannahay kuwo kale oo badan.
Xusuusnow in waxa ugu horreeya ee aad ku xisaabtanto si aad u noqoto naqshadeeye garaafeed waa in aad haysato kartida in la habeeyo, faahfaahsan iyo in ka badan oo dhan ma laha xad la hal-abuurka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Nashqadeeyayaasha Isbaanishka oo leh taariikh
Sida loo sameeyo halhays